08/30/13 ~ Myanmar News Updates
6:22:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အမေရိကန်၏ အဓိက မဟာမိတ် နိုင်ငံတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည့် ပြင်သစ်နိုင်ငံ
၏ သမ္မတ ဖရန်ကွိုက်စ် ဟော်လန်ဒေးက မိမိတို့သည် ဓာတုလက်နက်များ အသုံးပြုခဲ့သည့် ဆီးရီးယား အစိုးရအပေါ် အရေးယူရန် အသင့်ရှိနေကြောင်း
ဗြိတိန်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုအရ ဆီးရီးယားကို စစ်ဆင်မှု ပြုလုပ်မည့် အစီအစဉ်ကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သော်လည်း ယင်းအချက်ကြောင့် ပြင်သစ်၏ ရပ်တည်မှုကို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေမည် မဟုတ်ဟုလည်း ဟော်လန်ဒေးက ဆိုသည်။ "ပြင်သစ်ဟာ ဒမတ်စကက်က အစိုးရရဲ့ မလျော်မကန် လုပ်ရပ်ကို အရေးယူဖို့ လိုလားချက်အတွက် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ပါတယ်"ဟု ၎င်းက
ဟော်လန်ဒေးက ဗြိတိန်က စစ်ဆင်ရေးကိစ္စကို နောက်ဆုတ်သွားသော်
လည်း ပြင်သစ်ကမူ အစီအစဉ် အပြောင်းအလဲမရှိဟုလည်း ထပ်လောင်း
ဩဂုတ်လ (၂၁)ရက်နေ့က သူပုန်တပ်ဖွဲ့များကို ဓာတုလက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ကြောင်း စွပ်စွဲခံနေရသည့် ဘာရှာအယ်လ် အာဆက်ဒ် အစိုးရကို ပြင်သစ်က ပြစ်ဒဏ်ခတ်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း
ဟော်လန်ဒေးက ဆက်လက် ပြောဆိုသွားသည်။
လွှတ်တော်မှာ တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူအကျိုးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များအား တဆင့်မြင့် ရာထူးများတိုးပေးလိုက်ပြီ
6:11:00 PM Myanmar News Updates No comments
နိုင်ငံသား မဟုတ်သူများအား နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွင့်ကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို လက်ခံဆွေးနွေးရန် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာတွင် တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မှမတ်တပ်ရပ် ထောက်ခံနေစဉ်
ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပထမအကြိမ် သတ္တမပုံမှန် အစည်း အဝေးများ သြဂုတ် ၂၉ ရက် တွင် ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထိုအတောအတွင်း အခြေခံဥပဒေ လေ့လာ သုံးသပ်ရေး ပူးပေါင်း ကော်မရှင်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့သည့်အပြင် ဥပဒေ ၁၆ ခုကိုလည်း ပြည်သူများအကျိုး အတွက် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့သည်။
လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကာလအတွင်း တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြ သည့် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အချို့သည် အစည်းအဝေးပြီးပြီးခြင်း နောက်တစ်ရက်တွင် တပ်မတော် အတွင်း တဆင့်မြင့်ရာထူးများ တိုးမြှင့် ရရှိခဲ့ကြောင်း နေပြည်တော်အသိုင်းအ၀ိုင်းထံမှ သိရှိရသည်။
တဆင့်မြင့်ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသော တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အချို့သည် လွှတ်တော်အတွင်း တိုင်းပြည် နှင့် ပြည်သူအတွက် အကျိုးရှိစေသော ဆွေးနွေးချက်များကို ရဲရဲဝံ့ဝံထဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပြု ချက်များတင်သွင်းခြင်း တို့ကြောင့် တဆင့်မြင့်ရာထူးများ ချီးမြှင့်ခြင်း ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်မှ သိရှိရသည်။
တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များသည် လွှတ်တော်အတွင်း ထိုင်နေယုံသက်သက် မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးရှိစေမည့် အကြောင်းအရာများကိုလိုအပ်လျှင် ဆွေးနွေးကြခြင်း၊ တိုင်းပြည်အပေါ်အမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေသည့်ဥပဒေများကို ထောက်ခံအားပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးက သက်သေပြခဲ့သည်။
5:57:00 PM Myanmar News Updates No comments
ဒီသြဂုတ်လဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြယ်ပွင့်တွေကြွေတဲ့လလို့ဆိုရပါမယ်။ နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာတွေ၊ကဗျာ ဆရာတွေ၊တေးသံရှင်တွေ ကြွေလွင့်ခဲ့ တဲ့လဖြစ်ပြီး ၈၈၈၈အရေးတော်ပုံ ငွေရတုအထိမ်းအမှတ် လဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဒီလထဲမှာ သတင်းတွေများစွာရှုပ်ထွေးသလို အမေ ရိကန်ကလဲ ဆီးရီးယား ကိုတိုက်မယ်၊ခိုက်မယ်နဲ့ သတင်းတွေတော်တော်ဗလောင်ဆူတဲ့ လလို့ သတ်မှတ်ရပါမယ်။ အဲ့ဒီဗလောင်ဆူ တဲ့ သတင်းတွေကြားမှာ ကျနော်တွေ့ တာလေးတစ်ခုပြောချင်လို့ ဒီဆောင်းပါးလေးရေးလိုက်ပါတယ်။
ဟိုတစ်လောက်ကသတင်းတစ်ခုတွေ့ တယ်။၈၈မျိုးဆက်အနေနဲ့ စာရင်းရှင်းတမ်းမှာသိန်း၁၈၃၆ ရရှိပြီး သိန်း၁၃၀၀အသုံးပြုပြီး သိန်း၅ရာကျော်ကျန်သေးကြောင်း ၈၈မျိုးဆက် ကိုမြအေး စာရင်းရှင်း ထား တာတွေ့ရ တယ်။ အဲ့ဒီသိန်း၁၃၀၀ကုန်မယ့် ပွဲကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုး ကျင်းပတာလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ။ ကျန်တဲ့၅ ရာကျော်ကို လဲလှူမယ်၊ တန်းမယ်၊ ကူညီမယ်သာပြော ထားတာ။ ဘာမှမဘာရသေး။ ထားပါ။ အဲ့တာ ထောက်ပံ့ကြေးတွေနဲ့ လုပ်တာဆိုတော့ ဘယ်လို လုပ်လုပ်ပေါ့လို့ပြောလို့ ရမယ်။ ဒါပေမယ့် လှူတဲ့သူကတော့စေတနာကို အရင်းခံပြီး လှူတန်း ထောက်ပံ့ပေးထားတာ အလကား ဖြုန်းတီး ပစ်မယ့်အစား အများအကျိုးရှိအောင် ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ကူညီစေချင်တယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ စာရင်းရှင်းတာ လေနဲ့ပဲရှင်းတာဆိုတော့ အချိန်တန်ရင်သုံးရင်းဖြုန်းရင်းကုန်မယ်လို့ ပဲ ထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ထပ်တွေ့ တဲ့သတင်းတစ်ခုက တပ်မတော်သားများနှင့်ပါရမီဖြည့်ဖက်များ ဂရုတစ် ခုက သူတို့ ရဲ့ စာရင်းရှင်းတမ်း အလှူငွေစာရင်းထွက်လာတယ်။ကျပ်သိန်း၁၅၀ကျော်လှူတန်းပြီး သွားပြီ။ ဘယ်နိုင်ငံ အဖွဲ့ အစည်းကမှ ထောက်ပံ့ကြေးမရဘဲ လှူထားတယ် ဆိုတာ သိရတယ်။ စိတ်ထဲ မှာ တော်တော်စဉ်းစားစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာမှထောက်ပံ့ကြေး မရတဲ့ တပ်မတော်သားတွေတောင် သူတို့ ဟာသူတို့ ရတဲ့လစာလေးနဲ့ စုစည်းပြီး အများအကျိုး သယ်ပိုးနေတာသိန်း ၁၅၀ကျော်တောင် လှူတန်းပြီးသွားပြီ။ ထောက်ပံ့ကြေးတွေယူလိုက်၊ပွဲတွေလုပ်ပြီး ယူလိုက်နဲ့ လုပ်နေတဲ့ ၈၈မျိုးဆက်တွေ လှူတန်းထားတာ ဘယ်မှာလဲ။ဘာမှမတွေ့ ရ။နှိုင်းလို့ မသင့်ဘူးဆိုတာတော့သိပါတယ်။ ဘာလို့ဆို စိတ်ဓါတ်ချင်းတော်တော်ကွာနေလို့ ပါ။
တကယ်လဲ လေးစားစရာပါ။ တပ်မတော်သား မိသားစုတွေရဲ့စေတနာနဲ့ စည်းလုံးမှု ကိုတော့ မလေးစားပဲ မနေနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်။ကျနော်ဟာ ပြင်ပစီးပွားရေးလုပ်နေပေမယ့်ဝန်ထမ်းထဲမှာလဲ သူငယ်ချင်းတွေ တွေ့ နေတော့ သူတို့ လိုလခစားဝန်ထမ်းတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုတွေကြားထဲကနေ အကူအညီ အလှူအတန်းလုပ် ကိုင်နေကြတဲ့ အနာဂတ် ရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ လူတွေထင်နေကြတာက အစိုးရကို အတိုက်အခံလုပ်မှ နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။ အဲ့တာ ကျနော့်အမြင် တော့ပါးစပ်နိုင်ငံရေး၊ လုပ်စားနိုင်ငံရေး သမားတွေပေါ့ဗျာ။ အခုလို လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်သလို ကူညီဖေးမခြင်းဟာ ပါးစပ်နိုင်ငံရေး၊ လုပ်စားနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ အဓိကကတော့ ပရဟိတစိတ်ဓါတ် ပါပဲ။
မိမိတို့ အတွက်၊ မိမိတို့ နာမည်ရရေးအတွက် ပါးစပ်ကနေ အလုပ်လုပ်နေကြသော ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားဆိုသူတွေကိုတော့ အမှန်တကယ် အတ္တသမားတွေလားလို့ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ အရင်က ဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာ တစ်ခုခုဖြစ်ပီဆို ရှေ့ ကနေ ဟောင်ပွာဟောင်ပွာ။ ဒီနောက်ပိုင်း လဲ ရောက်ရော အကျင့်တွေ ပေါ်လာတော့တာပဲ။ဘင်္ဂလီကိစ္စမှာ ဘာအသံမှ ထွက်မလာတာ သာကြည့်ပေတော့။ ဘယ်လောက်တောင်ဘင်္ဂါလီတွေဆီကစားထားတာ နင်နေကြသလဲဆိုရင်။
အစိုးရက သူ့လမ်းသူ လမ်းကြောင်းဖြောင့်အောင်သွားနေတော့ လုပ်စားဖို့ ၊ဟောင်ပွာဟောင်ပွာ လုပ်ဖို့ က အခွင့်အရေးမရ။ အဲ့တော့ ပွဲတွေလုပ်။ နိုင်ငံခြားတွေသွား။ဟိုတောင်းဒီတောင်းပေါ့။ အခုလဲ နိုင်ငံခြားလေ့ လာရေး ဆိုလား။ဘာဆိုလားပဲ သွားအုံးမယ်တဲ့ ။အရင်က ပြည်သူ့ အတွက် ဆိုပြီးအသံကောင်းတွေ လွှင့်နေတဲ့ ၈၈။ အခုတော့ ပြည်သူ့ အတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်သလဲ။ ဘာတွေကော လုပ်ပေးပြီးပြီ လဲ။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ က ပြည်သူ့ အတွက် အစိုးရကို ကန့်လန့် တိုက်ပေးပါ့မယ်ဗျ ဆိုတာမျိုးတော့ လာမလုပ်နဲ့ ။ အဲ့လိုတော်ကီတွေက ၈၈ မျိုးဆက်ကို အားကျပါတယ် ဆိုတဲ့နလပိန်းတုန်းတွေ ကို ပဲရ မယ်။ ၂၀၁၃ ရောက်နေပြီ။ပြည်သူတွေလဲ အသိဥာဏ်ကြွယ်နေကြပြီ။
၈၈ ရဲ့ မဟာဗျူဟာအရ အစိုးရကို အတိုက်အခံလုပ်ပြီးနာမည်ယူမယ်ဆိုတဲ့ ဗျူဟာ ပြောင်းပြီး ပြည်သူ့ အတွက် အကျိုးရှိမည့်အလုပ်များပြုလုပ်ပြီးနာမည်ယူကြပါ။ လက်တွေ့ တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ် လုပ်ပေးနေကြ တဲ့ တပ်မတော်သားတွေကို အတုယူကြပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
5:52:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
အစိုးရ မနှိမ်နင်းနိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကို တာဝန်ယူမယ့်ဂျက်မ Baby Mg
5:46:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
5:31:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဆက်ဆွေးနွေးရန် ဆိုင်းငံ့ထားသည့် ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်မှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခြင်း ဥပဒေကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးပေးရန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌထံ စာပို့ တောင်းဆိုထားကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် များထံမှ စုံစမ်း သိရှိရသည်။
နိုင်ငံသားတိုင်းသည် မိမိတို့ မဲဆန္ဒနယ်အတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ကို ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခွင့် ရှိပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၉ အရ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းပိုင်ခွင့်လည်း ရှိသည့်အတွက် အဆိုပါ ဥပဒေ ကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ ပေးပို့ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းကို သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော် တွင် ဆွေးနွေးရာ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီ က ဆွေးနွေးခြင်းကို ရွေ့ဆိုင်းရန် တင်ပြချက်ကြောင့် ဆိုင်းငံ့ ထားခြင်း ဖြစ် သည်။
အဆိုပါဥပဒေကို အခြေခံဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း ဆက်လက် ဆွေးနွေး အတည်ပြု သင့်ကြောင်း တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များက တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယင်း ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အချို့နှင့် တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အချို့ လွှတ်တော်တွင်း အချေအတင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောကြားသည်။
လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ တာဝန်မှ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဆိုရှယ်လစ် အစိုးရ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင်လည်း ထည့်သွင်း ထားသည်ဟု နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ အချို့က ဆိုသည်။
5:19:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
လောကကြီးသာယာလှပဖို့အတွက်ချစ်ခြင်း မေတ္တာဟာ အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်နေပါတယ်. . လူတိုင်းအချစ်နဲ့ မကင်းနိုင်ကြပါဘူး . . . တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်မှာတော့ အချစ်နဲ့ကြုံတွေ့ကြမှာပါ. . .
အချစ်ဆိုတာကို လူအမျိုးမျိုးက အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး
ဖွင့်ဆိုကြပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ ဘယ်သူမှ ဘယ်လိုမှ ရှင်းပြလို့မရနိုင်
လောက်အောင် နက်နဲကတဲ့ ခံစားမှုမျိုးပါ . .
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ အန်မတန်ကိုမှ ဆန်းကြယ်လွန်းလှပါတယ် . . . ဆေးပညာရှုဒေါင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်
တော့ တစ်စုံ တစ်ယောက်အပေါ်မှာ ချစ်မေတ္တာယိုစိမ့်တဲ့ အခါ ချစ်တဲ့သူမှာရော
အချစ်ခံရသူမှာပါ စိတ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးကြရုံမျှ မက ကိုယ်ကျန်းမာရေးရော ၊
စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ပါ အန်မတန် အကျိုးပြုတာကို တွေ့ရပါတယ် . . . .
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ ကျန်းမာရေးက အံ့အားသင့်ဖွယ် နည်းလမ်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ဟာ လူသားတွေကို ပျော်ရွှင်စေရုံမျှမက ကိုယ်ခံအားကောင်းစေကာ
ရောဂါတွေ တိုက်ဖက်ပေးပါတယ်. . . ဒါအပြင် တခြားကျန်းမာရေးအတွက်
ကောင်းကျိုးများစွာလည်း ရှိပါတယ်. . . . ချစ်နေတဲ့သူနဲ့ အချစ်ခံရသူမှာ
ချစ်နေတဲ့သူက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးကို ပိုခံစားရနိုင်ပါတယ်. . . .
ဒါပေမယ့် ချစ်တတ်ဖို့လည်း လိုတာပေါ့ နော်. .
. . ချစ်နေရရင်ပြီးရော ဆို ကာ မေတ္တာစစ်မေတ္တာမှန်နဲ့ ချစ်တတ်ပါမှ
ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းမွန်ပါတယ်. . .
အချစ်က ကျန်းမာရေးအလေ့အကျင့်ကောင်းတွေ ကို ရစေနိုင်တယ်တဲ့ . . . .
အဓိကကတော့ ဘာကာလာမှ မရော အချစ်သန့်သန့်လေးနဲ့ ချစ်တတ်ဖို့ပါပဲ . . .
ပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်တွေက အပူမီးတောက်လောင်စေကာ အချစ်ကို အရောင်ဆိုးလိုက်သလို
ကိုယ်ချစ်နေတဲ့ သူစိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်နေတာကို မြင်ရုံနဲ့ ကျေနပ်
ပီတိစိတ်မွေးပါ. . . . မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန်နဲ့ ချစ်တတ်ပါက စိတ်ချမ်းသာ
ကိုယ်ကျန်းမာ ပြီး လောကကြီးက နေပျော်လာပါလိမ့်မယ် . . .
5:14:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ရန်ကုန်မြို့က အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပါးကို ဓားနဲ့ခြစ်မှုအတွက် သံသယဖြစ်ဖွယ် ၅ ယောက်ကို စစ်ဆေးဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ Facebook မှာ ရေးထားတာကို ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။၂၆.၈.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၄၃၀ အချိန် ဒေါ်ချိုချိုဝင်း၊ (၄၆)နှစ်၊ (ဘ)ဦးစိန်ဝင်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေသူသည် တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ အ.ထ.က(၃)ကျောင်းသို့ ကျောင်းကြိုရန် ဆိုက္ကားဖြင့်သွားစဉ် ကျောင်းလမ်းဆုံအရောက်၌ အမည်မသိလူ(၂)ဦးအနက်တစ်ဦးက ဆိုက္ကားအားတားကာ ကျန်တစ်ဦးမှသံပြားဝိုင်းဖြင့်ခြစ်ခဲ့သဖြင့်
ဒေါ်ချိုချိုဝင်း၏ ယာပါးတွင် ၃လက်မခန့် ဒေါင်လိုက်ပြတ်ရှဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောကြောင့် အရေးယူပေးပါရန် ဒေါ်ချိုချိုဝင်းမှ တိုင်တန်းခဲ့၍
တောင်ဥက္ကလာပမြို့မရဲစခန်း (ပ)၃၁၂/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၂၆/၃၄၁/၁၁၄ ဖြင့် အရေးယူကာ စုံစမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးရှိ တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ခဲ့ရာ
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတရားခံများဖြစ်သည့် လှဌေး၊ (ဘ)ဦးကျော်သိန်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ လှတိုး၊ (ဘ)ဦးစံရင်၊ (၁၃)ရပ်ကွက်၊ (၁၀)တောင်၊ သာကေတမြို့နယ်၊
ဟိန်းမင်းလတ်(ခ)အောင်အောင်၊ (ဘ)ဦးဖိုးထောင်၊ အားကစားကွင်းဝင်း၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်၊ မိုးသူ၊ (ဘ)ဦးသန်းဌေး၊ မှော်စက်ရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်နှင့် ဇော်ကြီး၊ (ဘ)ဦးသောင်းစိန်၊ ကျန်စစ်သားရပ်ကွက်၊ ဒလမြို့နယ်နေသူတို့(၅)ဦးအား ပြစ်မှုကျူးလွန်ပြီး(၃)ရက်အတွင်း ဖေါ်ထုတ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။
အမှုဖြစ်စဉ်မှာ ဒဏ်ရာရရှိသူဒေါ်ချိုချိုဝင်းနှင့်အိမ်ချင်းကပ်လျက်နေ လှဌေး (မြေပဲယိုလုပ်ငန်း) တို့မှာ မုန့်လုပ်စဉ်အညှော်နံ့ နံသည့်ကိစ္စဖြင့် မကြာခဏစကားများခဲ့ကြသည့်အတွက် လှဌေးမှ မကျေမနပ် ဖြစ်ကာ
ထောင်ထွက်(၂)ဦးဖြစ်သည့် လှတိုးနှင့်ဟိန်းမင်းလတ်(ခ)အောင်အောင်တို့အား ငွေကျပ်(၅)သိန်းဖြင့် ငှါးရမ်းခဲ့ကြောင်း၊
လှတိုးနှင့်ဟိန်းမင်းလတ်(ခ)အောင်အောင်တို့က ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်ခြင်းမပြုဘဲ မိုးသူနှင့် ဇော်ကြီး တို့(၂)ဦးအား ထပ်မံခိုင်းစေခဲ့သဖြင့်
အခင်းဖြစ်ပွားသည့်အချိန်၌ ဒေါ်ချိုချိုဝင်းစီး လာသောဆိုက္ကားရှေ့တွင် ဇော်ကြီးမှပိတ်ရပ်ကာ မိုးသူမှခဲတံချွန်ခေါက်ဓါးဖြင့် ဒေါ်ချိုချိုဝင်း၏ ယာပါးအား ဆွဲခြစ်ကျူးလွန်ထွက်ပြေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊
လှဌေးက ငှားရမ်းခငွေကျပ်(၅)သိန်းအား လှတိုးထံပေးအပ်ခဲ့ရာ လှတိုးကငွေကျပ်(၂၃၀၀၀၀)ယူကာ၊ ဟိန်းမင်းလတ်(ခ)အောင်အောင်အား ငွေကျပ် (၁၈၀၀၀၀)၊ မိုးသူနှင့် ဇော်ကြီးတို့အား တစ်ဦးလျှင်ငွေကျပ် (၄၅၀၀၀)စီ ခွဲဝေပေး အပ်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်ချိုချိုဝင်းနှင့် အခင်းဖြစ်နေရာတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြသူ တရားခံ(၂)ဦးမှာ ရန်ငြိုးရန်စနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ပတ်သက်သိရှိမှုမရှိဘဲ တရားခံ(၂)ဦးမှ ငွေကြေးရရှိ၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
5:12:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်အိမ်ရာနေ ကျောင်းသားများ မြွေဆိုးအန္တရာယ်ရင်ဆိုင်နေရ
ရန်ကုန်- ဒဂုံအရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားများ အများဆုံးနေထိုင်သော ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရိပ်မွန် ဥယျာဉ်မြို့တော်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းကာ ကာလကြာရှည်ရေ၀ပ်နေမှုများကြောင့်မြွေဆိုးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရကြောင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများက ပြောသည်။
ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်ဥယျာဉ်မြို့တော်သည် ဒဂုံတက္ကသိုလ်၏ အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး နယ်မှလာသော ကျောင်းသားများ အများဆုံး ငှားရမ်းနေထိုင်ကြကာ အဆောင်များပတ်ပတ်လည်တွင် ကြာရှည်စွာအသုံးမပြုဘဲထားရှိသော လယ်ကွင်းများရှိပြီး နှစ်စဉ်မြွေဆိုးအန္တရာယ်ကို ရင်ဆိုင်နေရသော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ပိုမိုဆိုးရွားလာသော ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် မြွေဆိုးအန္တရာယ် ပိုမိုကြီးမားလာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“အခုတလောပတ်ဝန်းကျင်မှာ မြွေတွေတော်တော်တွေ့လာတယ်။ မိုးကြီးလို့ လယ်ကွက်တွေထဲမှာ ရေတွေဝပ်နေတော့ ကုန်းမြေရှိတဲ့ လမ်းမပေါ်တက်လာတယ်။ ကျောင်းသားတွေကလည်း အများစုက ညဘက်ကျမှ အိမ်ပြန်လာကြတော့ အိမ်အပြန်လမ်းမှာ မြွေကိုက်ခံရတာတွေက ခဏခဏရှိနေပြီ” ဟု အဆိုပါဝင်းအတွင်း နေထိုင်သူ ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရိပ်မွန်အတွင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၁၀၀၀ ခန့် နေထိုင်ပြီး ဇွန်လမှ သြဂုတ်လအတွင်း မြွေပွေးအကိုက်ခံရသူ ခြောက်ဦးခန့် ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“မြွေပွေးကိုက်ခံရရင် အဆိပ်အနည်းအများပေါ် မူတည်ပြီး တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးမြွေဆိပ်ဖြေဆေးထိုးဖို့ လိုအပ်တယ်။ လူနာ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး မြွေဆိပ်ဖြေဆေး အနည်းဆုံး လေးလုံးကနေခြောက်လုံးလောက် ထိုးရတယ်” ဟု ဆရာဝန်တစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြွေကိုက်ခံရမှု၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် မြွေပွေးဖြစ်ကာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် မြွေဟောက်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတွင်း နှစ်စဉ် မြွေဆိပ်ဖြေဆေး လုံလောက်စွာ ဖြန့်ဖြူးထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် မြွေကိုက်ခံရမှုကြောင့် လူသေဆုံးမှုလျော့ကျမသွားသေးကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသန်းဝင်းက ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျုံပျော်မြို့နယ်နှင့် ရေကြည်မြို့ တိုက်နယ်ဆေးရုံများသို့ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးလှူဒါန်းပေးအပ်ပွဲတစ်ခု၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၅ မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အထိ အဆိပ်ရှိသတ္တ၀ါကိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်၁၅၀၀၀ ခန့် ရှိပြီး ပျမ်းမျှလူဦးရေ ၄၀၈ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ တစ်နှစ်တည်းတွင်မူ ဖြစ်စဉ်တစ်သောင်းကျော်တွင် သေဆုံးသူ ၂၅၃ ဦး သာရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်များအရ သိရသည်။
5:05:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
တော့ရက်စ်ကို ခေါ်ယူရန် စီစဉ်နေသည့် လီဗာပူးလ်
5:02:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
လီဗာပူးလ်အသင်းသည် ချဲလ်ဆီးအသင်း တိုက်စစ်မှူး တော့ရက်စ်ကို
ပြန်လည်ခေါ်ယူရန် တိတ်တဆိတ် စီစဉ်နေကြောင်းသိရသည် ။ အသက်
( ၂၉ )နှစ် အရွယ်ရှိ တော့ရက်စ်သည် ချဲလ်ဆီးအသင်းသို့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်
လီဗာပူးလ်အသင်း မှ စံချိန်တင် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင်သန်း ( ၅၀ )ဖြင့်
တော့ရက်စ်ကလည်း ယခုနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းရွှေ့ကာလတွင် အသင်းသို့
အန်ဇီအသင်းမှ တိုက်စစ်မှူး အီတူး ရောက်ရှိလာသလို လူကာကူသည်
လည်း ၀က်စ်ဘရွန်းအသင်းမှ အငှားစာချုပ် သက်တမ်းပြည့်ပြီး ပြန်လည်
ရောက်ရှိလာသောကြောင့် ၎င်း၏ အနာဂတ်ကို စိုးရိမ်နေပြီး အသင်းတွင်
မပျော်ရွှင်ဖြစ်နေကာ အသင်းပြောင်းရွှေ့ရန် စီစဉ်နေသည် ။ တော့ရက်စ်ကို
လီဗာပူးလ်အသင်း အပြင် စီးရီးအေ ကလပ်များဖြစ်ကြသည့် ဖီအိုရင်တီးနား
နှင့် နာပိုလီအသင်းတို့ကလည်း ခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားနေသည် ။
လီဗာပူးလ်အသင်းသည် ယခုနှစ်နွေရာသီ အပြောင်းရွှေ့ကာလတွင်
အသင်းမှ ထွက်ခွာဖွယ်ရှိနေသည့် တိုက်စစ်မှူး ဆွာရက်ဇ်၏ နေရာတွင်
အစားထိုးရန်အတွက် တော့ရက်စ်ကို ပေါင် ( ၁၈ )သန်းဖြင့် ကမ်းလှမ်းရန်
စီစဉ်နေ ခြင်းဖြစ်သည် ။
4:10:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
4:09:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတကို မလာနဲ့လို့ တရုတ်ပြော
4:07:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
တရုတ်နိုင်ငံဆီ ရှေ့သီတင်းပါတ်သွားရောက်ဖို့ ရှိတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတ
Benigno Aquino ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ တရုတ်ဖက်က
တောင်းဆိုခဲ့ တယ်လို့ ဖိလစ်ပိုင်က ပြောလိုက် ပါတယ်။ တောင်တရုတ် ပင်လယ်ထဲကရေပိုင်နက် အငြင်းပွားနေတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပါတ်သက်လို့ တရုတ်က ခုလို
ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ အချိန်အခါကျမှလာရောက်ဖို့ တရုတ် အစိုးရဘက်က ပန်ကြားခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း နန်နင်းမြို့ မှာ ကျင်းပတဲ့ ကုန်စည်ပြပွဲကို သမ္မတ Aquino မတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ် လို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ဒီကနေ့ပဲ ပြောလိုက် ပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေကြား စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကို မြှင့်တင်တဲ့ နှစ်ပါတ်လည် ကုန်စည်ပြပွဲကို ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီး Gregory Domingo ကိုပဲ ဖိလစ်ပိုင်က စေလွှတ် မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲတက်ရောက်ဖို့ သမ္မတ Aquino ကို တရုတ်ဘက်က
ဘယ်တုန်းကမှ ဖိတ်ကြားခြင်း မပြုခဲ့ဘူးလို့ တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက
ပြောပေမဲ့ နောက်ထပ် အသေးစိတ်ကိုတော့ ပြောခြင်း မရှိပါဘူး။
တောင်တရုတ် ပင်လယ် ထဲက ဗြူဟာမြောက်ပြီး အရင်းအမြစ်တွေ ကြွယ်ဝတဲ့နေရာ ကို သူပိုင် ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ် လို့ တရုတ်နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်တို့ကြား အငြင်းပွားနေတာပါ။
ဒီအငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ပင်လယ်ရေကြောင်း ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာခုံရုံးကို ဖိလစ်ပိုင်ဖက်က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က တင်ပြဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ အပေါ်မှာ တရုတ်အစိုးရက အမျက်ဒေါသ ထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Bruinei နိုင်ငံ မှာ ဒီကနေ့ ပြီးဆုံးသွားတဲ့ အာဆီယံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးတွေ၊ ဒေသတွင်းက အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေ၊ အမေရိကန် Australia စတဲ့ အာရှ Pacific ဒေသ နိုင်ငံတွေက ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးတွေကြား စည်းဝေးပွဲ မှာလဲ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲက ရေပိုင်နက် အငြင်းပွားတဲ့ ကိစ္စကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ အာရှနိုင်ငံတွေကြား ရေပိုင်နက်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့
တင်းမာမှုတွေ ကနေ နောက်ထပ် ပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်တယ်လို့
အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Chuck Hagel ကပြောပါတယ်။
ကွန်ပြူတာအသုံးများပြီး motherboard လောင်ပါက fatherboard ပြောင်းတပ်ပါ။ ထို့နောက်မှ တစ်ဆင့် sonboard ၊ daughterboard ၊ စသဖြင့် ဆွေမျိုးစုံအောင်တပ်ပါ။ တစ် board မဟုတ် တစ် board နှင့် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဘုတ်မှ အဆင်မပြေပါက မော်တော် ဘုတ် တပ်ကြည့်ပါ ။ အဆင်ပြေသွားနိုင်ပါသည်။
မိမိကွန်ပြူတာကို အခြားတစ်ဦး မကိုင်စေရန် system ပုံး ကိုသွားလေရာ ဖြုတ်ပြီး သယ်သွားပါ။ laptop ကွန်ပြူတာဆိုပါက စိတ်အချရဆုံးနည်းလမ်းမှာ သေ့ာတပ်ပြီး ခတ်ထားပါ။ သတိ မူရင်းသော့ မပျောက်ပါစေနှင့်။
4:00:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
(ရင်ထဲကိုနင့်နေအောင် ခံစားမှုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ပို့စ်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ )
စားသောက်ဆိုင်စားပွဲဝိုင်းတခုမှာ ယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းကလေး တယောက် ထိုင်နေကြတယ်။
မိန်းကလေးက ဝိုင်ခွက်ကို လှုပ်ကစားရင်းနဲ့ စကားစပြောလိုက်တယ်။
ယောကျာ်းက လက်မှာဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်ကို ပွတ်သပ်ရင်ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
"ကျွန်မ ဒါတွေဂရုမစိုက်ဘူး။ ရှင့်စိတ်ကိုပဲကျွန်မသိချင်တယ်။
ဒီအဖြေကို ကြိုတွေးမိကြမှာပါ။ ယောကျာ်းက ခေါင်းမော့ပြီးကောင်မလေးကိုသေ ချာကြည့်လိုက်တယ်။
မိန်းကလေးက အသက် (၂၄)နှစ်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုတယ်။ အရွယ်ကောင်းတဲ့အသက်အရွယ်ပါ။
အသားအရေဖြူစွတ်တယ်။ ဖျတ်လတ်သန်စွမ်းတယ်။ အရောင်တောက်ပြီးစွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်ဝန်းတစုံ
"တကယ်လို့ ရှင်လည်းကျွန်မက သဘောကျတယ်ဆိုရင် ကျွန်မရှင်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ချင်တယ်"
စိတ်မရှည်တဲ့အဆုံးမှာကောင်မလေးက ဒီစကားကို ထပ်ပြောလိုက်တယ်။
"ငါ့မိန်းမကိုငါချစ်တယ်" ယောကျာ်းက ပြတ်ပြတ်သားသားဖြေလိုက်တယ်။
"ရှင် သူ့ ကိုချစ်တယ်? သူ့ ကိုဘယ်လိုချစ်တာလဲ? အခုလက်ရှိ သူ့အသက်အရွယ်က အိုနေပြီ အရင်လိုကြည့်မကောင်းတော့ဘူးမလား? အဲဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီက ပါတီပွဲကို ရှင်တခါမှ မခေါ်လာရဲတာမလား ••••"
ကောင်မလေးက ဆက်ပြောသွားချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောကျာ်းရဲ့ အေးစက်စက်အကြည့် တွေကြောင့် စကားကိုရပ်တန့် လိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး အနည်းငယ် နှုတ်ဆိတ်သွားကြတယ်။
"မင်း ငါ့ကို ဘာတွေသဘောကျတာလဲ" ယောကျာ်းကမေးလိုက်တယ်။
"ရင့်ကျက်တယ်။ တည်ငြိမ်တယ်။ အပြုအမူတွေက ယောကျာ်းပီသတယ်။ ဂရုစိုက်တတ်တယ်။ အများကြီးရှိသေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတွေ့ ခဲ့ဖူးတဲ့ ယောကျာ်းတွေ့နဲ့ မတူဘူး။ ရှင်ကထူးခြားတယ် "
"လွန်ခဲ့တဲ့ (၃)နှစ်တုန်းက ငါဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတာ မင်းသိလား? "
"ကျွန်မ မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မဂရုမစိုက်ဘူး။ ရှင် ထောင်ကျဖူးလည်း အရေးမကြီးဘူး။"
"လွန်ခဲ့တဲ့ (၃)နှစ်က ငါလည်း မင်းတွေ့ခဲ့ဖူးတဲ့ယောက်ျားတွေလိုပါပဲ"
ကောင်မလေးကို ဂရုမစိုက်ပဲ ယောကျာ်းကဆက်ပြောတယ်။
"သာမန် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ရ။ အလုပ်လုပ်တာ အဆင်မပြေဘူး။ တနေကုန် အရက်တွေသောက် ဒေါသတွေခဏခဏထွက်။
ကိုယ့်ချစ်သူကိုလည်း ဂရုစိုက်ချင်မှစိုက်တယ် "
"ဒါဆို ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတာလဲ" ကောင်မလေးစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။
ဘယ်အရာက ဒီယောကျာ်းကိုပြောင်းလဲသွားစေတာလဲဆိုတာ သူသိချင်လာတယ်။
"သူက အမြဲတမ်းကိစ္စတိုင်းကို အတွင်းကျကျ သိထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ ငါ့ကိုအများကြီးသင်ပြပေးခဲ့တယ်။ အရှုံးအမြတ်ကိုသိပ်အလေးမထားဖို့။ မျက်စိရှေ့ က ပြသာနာကိုအရမ်းအလေးမထားဖို့ ။
အဲဒီအချိန်တုန်းက ငါကသူရှေ့မှာဆို ဘာမှ နားမလည် မသိတတ်သေးတဲ့ကလေးတယောက်လိုပဲ။ပြောရရင် အဲဒီအချိန်တုန်းကမင်းငါကိုမြင်သလိုမျိုးနဲ့ သိပ်မကွာဘူးလို့ ပြောရမယ်။
အဲတုန်းကတော်တော် ထူးဆန်းတာက စိတ်ဆတ် ခေါင်းမာတတ်တဲ့ငါက သူပြောတာပဲနားထောင်တယ်။
သူပြောတဲ့အတိုင်း အဖြစ်မှန်ကိုလက်ခံနိုင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသုံးမကျတာသိတော့ အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ့နှစ် နှစ်ကုန်မှာ အလုပ်က နည်းနည်း အဆင်ပြေလာခဲ့တယ်။
"အဲဒီအချိန်တုန်းက တော်တော် ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာ။ နှစ်ယောက်ကို ကုတင်တစ်လုံးတည်းနဲ့အိပ်ခဲ့ရတယ်။
အိမ်ကပစ္စည်းဆိုတာ နည်းလိုက်တာမှ သနားဖို့ တောင်ကောင်းတယ်။ ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီး တစ်နှစ်ကြာမှငါ သူ့ကို ပထမဆုံးစိန်လက်စွပ် (၁)ကွင်းဝယ်ပေးနိုင်တာ။ နှစ်ဝက်ကျော်လောက် ပိုက်ဆံစုလိုက်ရတယ်။
ဒါတောင် သူမသိအောင်ခိုးစုရတာ။ သူသိရင် ပေးဝယ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဲ့တုန်းကလည်း ဆေးလိပ် အရက်ကြောင့်
ကျန်းမာရေးက ဆိုးလာသေးတယ်။ ဆောင်းတွင်းဖက်ကြီးမှာလည်း ညမအိပ်ပဲ ငါ့အတွက် သူစွပ်ပြုတ် လုပ်ပေးတယ်။ အဲဒီ့အရသာမျိုးကို သူပဲလုပ်တတ်မယ် ထင်တယ်"
ယောကျာ်းက အရင်ကအကြောင်းတွေကို ပြောရင်းအချိန်ကိုသတိမထားမိလိုက်ဘူး။ အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုမနားတမ်းပြောနေမိတယ်။
မိန်းကလေးကလည်း စကားဖြတ်ချင်ပုံမရဘူး။ ပြောသမျှကို ငြိမ်နားထောင်နေတယ်။
ယောက်ျားက နာရီကို သတိထားမိတဲ့အချိန်မှာ ည(၁၀)နာရီထိုးနေပြီ။
"ဟား•• တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီလောက်မိုးချုပ်သွားတာ သတိမထားမိလိုက်ဘူး"
ယောကျာ်းက အားနာနာနဲ့ ပြုံးလိုက်တယ်။
"အခုမင်းနားလည်နိုင်ပြီလား?။ သူ့ အပေါ်သစ္စာဖောက်တဲ့လုပ်ရပ်မျိုး ငါလုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ လုပ်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူး"
"သိပါပြီ။ ဒီလိုလူတယောက်ကိအရှုံးပေးလိုက်ရတာ ကျွန်မကျေနပ်ပါတယ်"
မိန်းကလေးက လက်လျှော့လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ ခေါင်းခါရင်း ပြောလိုက်တယ်။
"ကျွန်မလည်း သူလို အရွယ်ရောက်ရင် သူ့ထက်ပိုသာမှာပါ"
"အင်းပေါ့ အဲဒါဆို ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ယောကျာ်းမျိုးရှာတွေ့ မှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား? အရမ်းမိုးချုပ်နေပြီ။ ငါလိုက်ပို့ပေးမယ်။" မိန်းကလေးကိုလိုက်ပို့ ပေးဖို့ သူထလိုက်တယ်။
"ရပါတယ် ကျွန်မဖာသာပြန်လိုက်ပါမယ်" ကောင်မလေးက လက်ဟန်ပြပြီးတော့
" ပြန်သွားတော့လေ သူစိတ်ပူနေလိမ့်မယ်" လို့ ဆက်ပြောလိုက်တယ်။
ယောကျာ်းက တချက်ပြုံးပြီး လှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်။
ညအမှောင်ထဲမှာ ယောကျာ်းရဲ့ အရိပ်အယောင်တွေ တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။
မိန်းကလေးတယောက်တည်း စားပွဲဝိုင်းမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။
ယောကျာ်းအိမ်ပြန်ရောက်တော့ တံခါးဖွင့်ပြီး အိပ်ခန်းဆီကို တန်းသွားလိုက်တယ်။ မီးဖွင့်လိုက်တယ်။
ကုတင်နားကို လျှောက်သွားပြီး ထိုင်လိုက်တယ်။
"မိန်းမရေ ဒါ(၄)ယောက်မြောက်ရှိပြီ။ ဘာဖြစ်လို့ ငါကို ဒီလောက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးခဲ့တာလဲ?
အခု ငါ့ကို ကြိုက်နေတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိနေပြီ။ တော်ကြာငါစိတ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်နော်။ ဘာဖြစ်လို့ ငါကို ဒီလောက်ကောင်းအောင် လုပ်ပေးပြီးတော့ တစ်ယောက်တည်း အရင်ထွက်သွားရတာလဲ?
ငါ တစ်ယောက်တည်း ကျန်နေခဲ့တာ အရမ်း အထီးကျန်နေပြီကွာ"
သူ မျက်ရည်တွေကို မျိုသိပ်ရင်းပြောနေတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးတော့ မျက်ရည်တွေ မထိန်းနိုင်ပဲစီးကျလာတယ်။
တစက်ပြီး တစက် ပါးပြင်ပေါ်က စီးကျလာပြီး လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဘောင်ပေါ် ကျသွားခဲ့တယ်။
အလင်းရောင်မပြည့် ဝတဲ့ မီးရောင်အောက်မှာ ဓာတ်ပုံထဲမှာဆုံးသွားတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ကြင်နာမှုတွေ ပြန့်နှံ့နေခဲ့တယ်။
Translated by Ko AungYar Zar...
Virginity fraud အပျိုရည်ပျက်ခြင်း
ဆူဇူကီးလိုက်ထရပ် ကားတိမ်းရှောင်ရာမှ တစ်ဖက်ယာဉ်ကြောကျော်ပြီး ဟွန်ဒိုင်းလေအိတ်ကားနှင့်တိုက်
ကမ္ဘာ အေးဘုရားလမ်းနှင့် အင်လျားကန် ဟိုတယ်သွားလမ်းအနီးတွင် ယနေ့ မွန်းလွဲတစ်နာရီ ၁၅မိနစ်က ယာဉ် မတော်တဆတိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ သည်။
မင်္ဂလာဒုံအပြည်ပြည်ဆိုင် ရာလေဆိပ်သို့ ခရီးသည်ကြိုဆို ရန်မောင်းနှင်လာသည့် ၆ဂ/--- ဟွန်ဒိုင်းလေအိတ်ယာဉ်ကြီးအား ဆူးလေဘက်သို့ မောင်းနှင်လာ သည့် Classic International ကုမ္ပဏီပိုင် ၃ဂ/---- ဆူဇူကီး ပစ်ကပ်ယာဉ်သည် မိမိယာဉ်ကြော ဘက်မှ ကားကိုတိမ်းရှောင်ရာမှ လမ်းချော်ပြီး တဖက်ယာဉ်ကြော မှ ဟွန်ဒိုင်းလေအိတ်ယာဉ်၏ ဘယ် ဘက်သို့သွားရောက်တိုက်မိခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါယာဉ်မတော်တဆ မှုကြောင့် ၆ဂ/---ယာဉ်၏ ဘယ် ဘက်နောက်ကြည့်မှန်နှင့် ရှေ့ဘယ် ဘက်အချက်ပြမီးသီးကွဲပျက်ခဲ့ပြီး ၃ဂ/---ဆူဇူ ကီးလိုက်ထရပ်ယာဉ် ၏ ရှေ့လေကာမှန်၊ ဘယ်ဘက် တံခါးပြုတ်ထွက်ခဲ့သော်လည်း မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မဲပေးလိုသူများ အောက်ပါလင့်ခ်ကို နှိပ်ကြရန် မခင်ဝင့်ဝါမှ သူမ၏ Facebookhttps://www.facebook.com/khinwint.wah.73 တွင် ဆော်သြ ထားသည် ။ အောက်ပါ Link ကိုနှိပ်ပြီး မခင်ဝင့်ဝါ၏ ဓါတ်ပုံကို ၂ချက်နှိပ်ဖွင့်ပါ။ ပုံအကြီး ပေါ်လာလျှင် အနီရောင် စာလုံး Голосовать ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် Vote ပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့က စပြီး မဲစပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ ၁၂း၀၀ နာရီ အချိန်ထိ မဲပေးလို့ ရသည်ဟု သိရသည်။
1:22:00 PM Myanmar Newsupdates No comments
လွှတ်တော်မှာ တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူအကျိုးအတွက် ဆွေး...
တန်ဖိုးနည်း ၁၅၀၀ ကျပ်တန်ဆင်းကတ်များ ချထားပေးပြီးနေ...
အစိုးရ မနှိမ်နင်းနိုင်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကို တာဝန...
ကရင်ပြည်နယ် သို့ အဓိက လာရောက်သူများမှာ သမိုင်းဆိုင...
အမျိုးသမီးပါးကို ဓားဖြင့်ခြစ်မှုအတွက် ၅ ဦးကို ဖမ်းဆ...
ပြည်ပဆားများ ပြည်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်မှု များပြားလာသြ...
မြန်မာပြည်တွင်းသို့ တရုတ်ပြည်မှ မှောင်ခိုလမ်းကြောင...
ဆူဇူကီးလိုက်ထရပ် ကားတိမ်းရှောင်ရာမှ တစ်ဖက်ယာဉ်ကြော...
အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ ၂၁ ရာစုနှစ်အတွင်း အကြီးမားဆုံးသေ...
W.y ဟု ရေးထားသော ဆေးများကိုလည်း သောက်ခိုင်းပါသည်၊ ...
ဆီးရီးယားကို စစ်တိုက်မယ့် ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချူပ်ရဲ့ အ...
ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား လုံခြုံရေး ရဲမေ ၁၇ ဦး ပုဂံဇုန်...
ရည်းစားစုံတွဲထံမှ ပစ္စည်းများ လုထွက်ပြေးသူ(၃)ဦးကို...
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ပရိသတ်ကို ရွန်နီ ကျေးဇူးစကားဆ...
ကျိုင်းတုံ မြို့နယ် ရေကြီးမှု ဒေသခံကြုံရ
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ လုံခြုံရေးန...
(၇၄) နှစ်မြှောက် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ အခမ်းအနား မြန်...
မြန်မာ့ငွေဈေး (30.8.2013 11:00AM)
Laptop သုံးစွဲသူများ သတိပြုရန်အချက်များ
မြေယာသိမ်းပိုက်တဲ့ တရုတ်ဘူဒိုဇာကြောင့် ၄ နှစ်သမီးင...
ချန်ပီယံလိဂ် 2013-2014 အုပ်စုအဆင့် မဲခွဲမှု
ထိုင်းနှင့် မြန်မာ လက်ရွေးစင် ကစားသမားဟောင်းများ ယ...
တွံတေးမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀ ခုမှ အိမ်ခြေ ၁၀...
ဆူးလေမီးပွိုင့်ရှိ လူကူးမျဉ်းကြားတွင် တာဝန် ထမ်းဆေ...
GSM/WCDMA / CDMA 800 တို့ရဲ့ အင်တာနက် setting များ...
မောင်တော ပဋိပက္ခတွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူ ဘင်္ဂါလီ ၇၀ ...
ဆီးရီးယားကို အမေရိကန်တို့ တိုက်မည်မို့ အစ္စရေးတို့လ...